Waa maxay shuruudaha looga baahan yahay guurka kaniisadda? | Bezzia
Waa maxay shuruudaha looga baahan yahay guurka kaniisadda?
Maria vazquez | 06/10/2021 10:00 | Aroosyada
Mid ka mid ah go’aammada ugu horreeya ee lamaanaha doonaya inay is -guursadaan ay tahay inuu ku saabsan yahay nooca arooska ay rabaan, madani ama diin? Haddii adiga iyo lammaanahaagu aad go'aanteen guursada diin ahaan Sida waafaqsan awaamiirta Kaniisadda Kaatooligga, waxaa jiri doona shuruudo gaar ah oo ay tahay inaad buuxiso.
Waa maxay shuruudahaan guurka kaniisadda? Midda ugu weyni waa inaad tagto kaniisaddaada si aad u ogaato nooca dukumentiyada ay tahay inaad keento ka hor inta aanad u dabaaldegin arooska. Markaad la kulanto wadaadka kaniisadda, waa inaad qaadataa guurka kahor iyo soo aruuri dukumentiyada loo baahan yahay furitaanka faylka guurka.
1 Ka ogow kaniisaddaada
2 Qaado koorsada guurka kahor
3 Dooro laba markhaati si aad u qaadatid odhaahyada
4 Uruuri dukumentiyadaada
Ka ogow kaniisaddaada
Ma go'aansatay inaad kaniisadda ku guursato? Tallaabada ugu horreysa waa inaad tagto kaniisadda aad rabto inaad guursato ugu yaraan hal sano ka hor si aan kuu ogeysiiyo dhammaan shuruudaha iyo xafido taariikhda xiriirka.
Wadaadka kaniisadda ayaa labadoodaba kuu soo sheegi doona dukumentiyada ay tahay inaad keento Kahor intaadan u dabaaldegin arooskaaga diimeed ee Kaatooligga, iyo sidoo kale jadwalka koorsooyinka guurka ka hor oo ay tahay inaad fuliso iyo baahida loo qabo inaad fuliso dhowr bilood ka hor arooska qaadashada erayada oo ay la socdaan laba markhaati.
Qaado koorsada guurka kahor
Waa mid ka mid ah shuruudaha guurka kaniisadda. Waxay ka kooban yihiin fadhiyo taxane ah taas oo ka tarjumaysa qoyska iyo nolosha oo wada jirta, kuna dul nool dhibaatooyinka suurtagalka ah, xallinta khilaafaadka iyo qaar ka mid ah fikradaha kitaabiga ah iyo qawaaniinta kaniisadda ee guurka iyo galmada.
Kulamada fool-ka-foolka ah badanaa waa kulamo kooxeed, iyaga oo kula kulmaya lamaanayaasha kala duwan ee danaynaya inay is guursadaan iyo wadaadka kaniisadda. Waxaa lagu samayn karaa kaniisad kasta iyo xitaa khadka tooska ah haddii ay dhacdo in aysan suurtogal ahayn in mid ka mid ah xubnaha lammaanuhu uu si shakhsi ah uga qaybgalo. Kaniisadaha oo dhami ma bixiyaan laakiin aad iyo aad bay u sii sharraxayaan kuwan koorsooyinka interneedka bedel ahaan
Goorma ayay tahay in la sameeyo? Caadi ahaan waxay ku kacaan dhowr kulan, sidaa darteed waxa ugu habboon in la qaato koorsada guurka lix bilood guurka ka hor si aan loo culaysin wax ka badan intii aad samayn lahayd marka taariikhdu soo dhowaato.
Dooro laba markhaati si aad u qaadatid odhaahyada
Shuruudda kale ee ah in lagu guursado kaniisadda waa qaadashada odhaahyada, oo ah habka ay labada lamaane guur iyo lammaanaha guurkuba uga qaybgalaan. laba markhaati, mid matalaya xubin kasta oo lammaanaha ka mid ah. Markhaatiyaashaani waa inay buuxiyaan shuruudo taxane ah: inay yihiin qaan -gaar sharci ah oo aan dhiig ahaan la xiriirin dhinacyada wax soo iibsanaaya. Ma noqon karaan qaraabo, laakiin waa inay si qoto dheer u ogaadaan lamaanaha mustaqbalka.
Markhaatiyaasha ayaa mas'uul ka noqon doona xaqiijinta, ka jawaabaya su'aalo taxane ah oo uu weydiiyay wadaadka kaniisadda, inaad si xor ah u guursato iyo inaysan jirin wax caqabad ah oo sidaas lagu yeelayo. Waxay noqon doontaa wadaadka kaniisadda oo tilmaami doona taariikhda kulankan, oo badanaa la qabto laba ama saddex bilood ka hor arooska.
Waxay noqon doontaa wadaadka kaniisadda oo kugu wargelin doona taxanaha dukumiintiyada aasaasiga ah ee ay tahay inaad soo bandhigto si aad u furto feylka guurka, laakiin waxaan hore u filaynay in shuruudaha arooska Katooliga isku mid ah diimaha kala duwan ee Isbaanishka. Waxaad u baahan doontaa:
Nuqul ka mid ah DNI, baasaaboor ama kaarka joogitaanka mid kasta oo ka mid ah xubnaha lammaanaha.
Nuqul ka mid ah Buugga Qoyska ee waalidka meesha magacaagu ku qoran yahay.
Baabtiiskii labada isqaba. Waa inaad ka codsataa kaniisadda lagu baabtiisay, adoo bixinaya magacaaga, magacaaga iyo sannadka baabtiiska.
Shahaadada dhalashada suugaaneed mid kasta oo ka mid ah aroosadda iyo aroosadda. Waxaa laga codsadaa Diiwaanka Madaniga ah ee magaalada dhalashada, guud ahaan ballan.
Shahaadada iimaanka iyo darajada. Waxaa laga codsadaa Diiwaanka Madaniga ah diiwaanka madaniga ee u dhigma cinwaankaaga caadiga ah, guud ahaan ballan.
Shahaadada koorsada guurka ka hor.
Haddii ay dhacdo in mid ka mid ah labada isqaba uu yahay carmallo ama uu ahaa hore u guursaday, Shahaadada guurka iyo shahaadada geerida xaaska ayaa sidoo kale laga codsan doonaa kiiska koowaad iyo shahaadada furiinka marka labaad.
Dawladda Isbaanishku waxay u aqoonsan tahay guurka qaanuunku inuu yahay mid sharci ah, sidaa darteed uma baahnid inaad hore ugu dabbaaldegto guurka Diiwaanka Madaniga ah ama maxkamadda. Haddii aad haysato, si kastaba ha ahaatee, waa inaad haysataa shahaadadaada guurka madaniga ah iyo nuqul ka mid ah.
Hadda waxaad taqaan dhammaan shuruudaha kahor a aroos kaamil ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Aroosyada » Waa maxay shuruudaha looga baahan yahay guurka kaniisadda?
Maaskaro wajiga qajaarka waa inaad isku daydaa
Talooyin ku saabsan inaad ku kala tagtaan sida ugu fiican ee lammaanahaaga